भौतिकवादी प्रचण्डको धार्मिक यात्रा
सागर चन्द काठमाडौं, १ जेठ
समय २०५८ देखि २०६१ सम्म
माओवादी सशस्त्र विद्रोह उत्कर्षमा थियो । परम्परागत मान्यता भत्काउँदै थिए माओवादीहरु । सामाजिक मान्यता भत्काउने क्रममा उनीहरुले धार्मिक आडम्बर र कर्मकाण्डी मान्यतामाथि प्रहार गरे ।
७ असोज २०५८ रामेछाप जिल्ला नागदह गाविस–४ मा माओवादी कार्यकर्ताले गाई काटेर भोज खाए ।
८ मंसिर २०६० मा उदयपुरको तत्कालीन बट्टार गाविसका विष्णु कार्कीको किरिया गर्न लाग्दा माओवादीले ढिकुरो भत्काए, काजकिरिया गर्न दिएनन् ।
२६ जेठ २०६० मा अछाम जिल्ला विनायक गाविसस्थित विनायकमा कालोसिम्लो मस्टो देवताको मन्दिर भत्काए, मन्दिरमा दिसा–पिसाब पनि गरे ।
तत्कालीन माओवादीले २०६१ सालमा दैलेखको गमौडीस्थित शिरस्थान मन्दिरका पुजारीलाई निर्घात कुटपिट गरे । जनसत्ताको निर्णय अवज्ञा गर्दै पूजा गरेको आरोपमा पुजारी कुटिए, मन्दिरमा दिसा–पिसाब गरियो ।
माक्र्सको धर्मलाई अफिम भन्ने संज्ञाको अपव्याख्याका आधारमा त्यसबेला धर्ममाथिको प्रहार कम्युनिस्ट हुनुको लाहाछाप ठानियो । कट्टरपन्थी कम्युनिस्ट राजनीतिक दर्शन बोकेको तत्कालीन माओवादीका सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनमा कार्यकर्ताले धर्मलाई विकासको बाधक ठान्दै सशस्त्र विद्रोह समयावधिमा सर्वसाधारणलाई धर्म नमान्न उर्दी नै जारी गरे ।
विद्यार्थी कालदेखि नै कम्युनिस्ट विचारधाराप्रति मोहित प्रचण्डले २०२८ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिए । २०३५ सालमा पूर्णकालीन सदस्य भए । प्रचण्ड विभिन्न समयमा चितवन, नवलपरासी र गोरखाका स्कुल तथा कलेजमा शिक्षणमा संलग्न भए । पूर्णकालीन सदस्य हुनुअघि रामपुर क्याम्पसमा कृषि पढेका प्रचण्ड २०३३ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था यूएसएडमा जागिरेसमेत भए ।
१० कक्षा पढ्दै गर्दा ‘सचित्र चीन’ नामक पत्रिकामा चिनियाँ नेता माओको तस्बिर देखेर कम्युनिस्टप्रति आकर्षित भएको बताउने गरेका प्रचण्ड नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका महत्त्वपूर्ण नेतृत्व हुन् । माओको तस्बिर देख्दाको क्षण उल्लेख गर्दै प्रचण्डले सविना कार्कीलाई दिएको एक रेडियो अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘सचित्र चीनमा एउटा राम्रो मान्छेको ठूलो फोटो थियो । यसो हेरें, मैले फोटो हेरिराखें एक छिन ।’
भूमिगत भएर माओवादी सशस्त्र विद्रोह सञ्चालन गर्दासम्म ‘प्रचण्ड’ प्रचण्ड थिएनन् । १० कक्षा पढ्दाको छविलाल दाहाल नाम परिवर्तन गरी पुष्पकमल दाहाल भएका उनी ‘प्रचण्ड’ नाम राख्नुअघि विश्वास, कल्याण, निरज, कमल र नवकिशोरजस्ता नाम प्रयोग गर्थे । प्रचण्ड नाम उनले अहिलेको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी वैद्य समूहका नेता सीपी गजुरेलसँग सापट लिएका थिए अथवा हाइज्याक गरेका थिए ।
सटिक निर्णय क्षमता र अध्ययनशील व्यक्तिका रुपमा चिनिने प्रचण्डको नाममा पार्टीले सिद्धान्त नै प्रतिपादन गर्यो । सशस्त्र विद्रोह सुरु भएको करिब ५ वर्षपछि तत्कालीन माओवादीले प्रचण्डको नामपछाडि ‘पथ’ जोड्दै ‘प्रचण्डपथ’ सिद्धान्त नै प्रतिपादन गर्यो ।
०५७ सालमा २६ माघदेखि १ फागुनसम्म भारतको पन्जाब जलान्धरमा भएको ‘माओवादी दोस्रो सम्मेलन’बाट माओवादीले मार्गदर्शक सिद्धान्तमा प्रचण्डपथ थप्यो ।
माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद अपनाइरहेको माओवादीले आफ्नो मार्गदर्शनमा प्रचण्डपथ थप्नुको कारण उल्लेख गर्दै जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘पार्टी एक दशकदेखि विचार संश्लेषणको यो उचाइँसम्म महामन्त्री क. प्रचण्डको सही र अविछिन्न नेतृत्वका कारण आज पार्टी एकताको केन्द्रबिन्दुका रुपमा क. प्रचण्डको बलियो सर्वहारा हेडक्वार्टरको विकास भएको छ । अतः सामूहिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिका रुपमा विकसित विचार शृंखलालाई पार्टी प्रचण्डपथ नामकरण गर्दछ ।’
यसपछि माओवादीले आफ्ना दस्तावेजमा ‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद र प्रचण्डपथ’ लेख्न थाल्यो ।
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कुनै नेताको नामबाट पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त तय भएको यो नै पहिलोपटक थियो । माओवादीले २०५७ फागुनमा जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘...प्रचण्डपथले माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादलाई समृद्ध गर्दै नेपाली क्रान्तिको अग्रगमनमा महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश गर्नेछ । त्यसअनुसार पार्टीको निर्देशक विचार अब ‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद र प्रचण्डपथ’ बन्न गएको छ ।’
प्रचण्डपथलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएसँगै माओवादीले गर्ने विभिन्न कार्यक्रममा माक्र्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन र माओको तस्बिरसँगै प्रचण्डको तस्बिर राख्न थालियो ।
माओवादीले ‘प्रचण्डपथ’ प्रचारप्रसार गर्न कुनै कसर बाँकी राखेन । माओवादीका सांस्कृतिक कार्यकर्ता मणि थापाले प्रचण्डपथको प्रशंसा गर्दै यस्तो गीत रचेः
‘मार्क्सवादी, लेनिनवाद, माओवादको बाटो हो यो
संसारलाई फेर्न सक्ने प्रचण्डपथ हो यो ।’
संसदीय राजनीतिमा सहभागी
सशस्त्र विद्रोह समाप्त गर्दै प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी २०६३ मंसिरमा शान्ति सम्झौता गर्दै संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गर्यो । ‘राज्य सत्ताबाहेक सबै भ्रम हो’ भन्दै सुरु भएकोे सशस्त्र विद्रोहले राज्यसत्ता कब्जा गर्न नसकेपछि माओवादी संसदीय राजनीतिमा आउनुपर्यो । तैपनि, माओवादीले आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्तबाट प्रचण्डपथलाई हटाएको थिएन ।
माओवादी संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेको दुई वर्षपछि अर्थात् ६ देखि ११ मंसिर २०६५ मा भक्तपुरको खरिपाटीमा आयोजित बहुचर्चित राष्ट्रिय भेलामा प्रचण्डले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरुद्ध जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी समाजवाद र साम्यवादको दिशामा अगाडि बढ्न २१औं शताब्दीको वर्तमान परिस्थितिमा दीर्घकालीन सशस्त्र विद्रोहको रणनीतिमा आमसशस्त्र जनविद्रोहका कार्यनीतिको समेत समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने मूलभूत संश्लेषणका साथै नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा गर्ने रणनीतिक शृंखलाका रुपमा सर्वपक्षीय सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधानसभा प्रस्तुत गर्नु नै प्रचण्डपथ संश्लेषणका प्रमुख आधार हुन्’ उल्लेख छ ।
प्रचण्डपथ अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको एक महिनामै माओवादीले मार्गदर्शक सिद्धान्तबाट प्रचण्डपथ हटायो । ३० पुस २०६५ मा नेकपा माओवादी र नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ नेतृत्वको नेकपा एकता केन्द्रसँग पार्टी एकता गरेपछि प्रचण्डले नै लिखित रुपमा तत्कालका लागि प्रचण्डपथलाई पार्टीको पथप्रदर्शक विचारबाट स्थगित गरी माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद÷माओ विचारधारालाई पार्टीको पथप्रदर्शक सिद्धान्त मान्ने निर्णय गरे ।
भौतिक र अध्यात्मको फ्युजन
धार्मिक संकीर्णताले नेपाली समाजको गति र विकास रोकिएको टिप्पणी गर्ने माओवादी संसदीय राजनीतिमा आइसकेपछि प्रचण्डले प्रचण्डपथ मात्रै त्यागेनन्, कम्युनिस्टको सामान्य मागदर्शनसमेत भुले । सन्त भनिने कृष्णजी महाराजले दिएको सल्लाहअनुसार ग्रह सपार्न प्रचण्डले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सर्लाही पुगेर भैंसी पूजा गरे ।
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ लेख्छन्, ‘शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि विचारधारात्मक दृष्टिकोणमा पनि शान्ति छायो । प्रचण्ड द्वन्द्वात्मक भौतिकवादभन्दा उल्टो दिशामा हिँड्न पुगे । उनी धार्मिक कार्यक्रममा हिँड्न थाले । भौतिकवाद र अध्यात्मवादको फ्युजन गर्छु भन्दै हिँडे ।’
प्रचण्डले विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम उदघाटनमा समय खर्चिए । उनले कहिले बाबा रामदेवको आर्शीर्वाद थापे त कहिले पूजापाठमा लागे ।
उनी कम्युनिस्टको मूल मन्त्र भौतिकवादी दर्शन भुलेर धर्मकर्ममा लागे । उनले विभिन्न मन्दिरमा पूजा गरेको तस्बिर बाहिरियो । तसर्थ, कम्युनिस्टकै भाषामा भन्ने हो भने अन्धविश्वासका भक्त भएर प्रचण्ड स्वयं विकासका बाधक बने ।
आईएस्सी पढ्दा गाँसबासका लागि धौधौ हुने गरेको प्रचण्ड स्वयंले प्रसंगवश बताउने गरेका छन् । तर, शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै प्रचण्डको जीवनशैलीमा एकाएक परिवर्तन भयो । बीबीसी नेपाली सेवासँगको अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले आक्रोशित हुँदै जवाफ दिए, ‘अनि के नांगै हिँड्नु ? यो के भन्न खोज्या हो, म केही कुरै बुझ्दिनँ ।’
जाँड–रक्सी पिउन सिकेका प्रचण्डले त्यसलाई ‘बानी’मा रूपान्तरण गरेनन्
दोस्रोपटक प्रधामन्त्री हुँदा प्रचण्डले ३ तोला सुन र १ कट्ठा जमिन सम्पत्ति रहेको देखाएका थिए । त्यसो त गत वर्ष प्रचण्डले दिएको एक रेडियो अन्तर्वार्तामा आफूले श्रीमती सीता दाहाललाई हीराको चेन उपहार दिएको बताए ।
प्रचण्डबारे ‘सशस्त्र विद्रोहका नायकहरु’ पुस्तकमा लेखिएको छ, ‘सेतो सर्ट र कालो पाइन्ट उनलाई प्रायः मन पर्ने कपडा हुन् । सुरुमा दूध र घिउ खान मन पराउने प्रचण्डलाई मःम पनि खुब मीठो लाग्छ । केही समय अलि अलि जाँड–रक्सी पिउन सिकेका प्रचण्डले त्यसलाई ‘बानी’मा रूपान्तरण गरेनन् ।’
छोरी ज्ञानु दाहालको मृत्युपछि अस्वस्थ देखिएकी प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाल छोरा प्रकाशको मृत्युसँगै झन् बिरामी भइन् । छोराछोरीको असामयिक निधन र पत्नी सीता दाहाल पार्किन्ससले ग्रस्त भएपछि प्रचण्ड आस्तिक हुँदै गएकोे देखिन्छ ।
हुन सक्छ, उनले भनेजस्तै पत्नीको मनोविज्ञान सही गर्न होस् । तर, सीता पनि त प्रचण्डसँगै लगातार सहयोगीका रुपमा रहँदा भौतिकवादी दर्शनबाट प्रभावित भइनन् होला र ?
प्रचण्ड पत्नीको उपचारका लागि म्याग्दीको तातोपानी कुण्डदेखि विदेशसम्म पुगे । त्यस्तै, आस्थाको लौरो टेक्दै उनी ‘गुगल ब्याइ’ भनिने आदित्य दाहालकहाँ पनि पुगे ।
अघिल्लो दिन जंगल जान्छु भनेका प्रचण्डले २३ वैशाखमा आफू सबै चिज त्यागेर गौतमबुद्ध बन्न सक्ने सुनाए ।
कम्युनिस्ट नेता पुष्पलाल भन्थे, ‘पाँच ‘प’ ले नेपाली समाज पछि परेको छ ।’ उनले भनेका पाँच ‘प’ थिए, पुर्पुरो, परम्परा, परमेश्वर, पुनर्जन्म र परलोक । नेपाली समाजबाट यी पाँचवटै ‘प’ हटाउँदै समाजलाई अग्रगामी छलाङ दिलाउँछु भनेर लागेका प्रचण्ड अन्ततः यी पाँचवटै ‘प’को शरण परे । पुष्पलालले भनेका पाँच ‘प’मा प्रचण्डले भरतपुर महानगरको निर्वाचनमा परिवारवादको अर्को ‘प’ पनि थपे ।
अधिकांश क्रियाकलाप आलोचित हुन थालेपछि उनले २२ वैशाखमा आफू फेरि जंगल जान सक्ने बताए । अघिल्लो दिन जंगल जान्छु भनेका प्रचण्डले २३ वैशाखमा आफू सबै चिज त्यागेर गौतमबुद्ध बन्न सक्ने सुनाए ।
प्रचण्डलाई धेरैले अस्थिर स्वभावका नेता भन्छन् । तर, उनी रुचाउँदैनन् । आफूलाई अस्थिर भन्नेलाई उनको जवाफ छ, ‘म अस्थिर छु भनेर जो ठान्छन्, त्यो सबभन्दा ठूलो भ्रम हो । म एउटा उद्देश्यप्रति निरन्तर अगाडि बढिरहेको छु भन्ने मलाई लाग्छ ।’
उनी बाल्यकालदेखि नै अस्थिर स्वभावका देखिन्छन् । उनले १० कक्षा पढ्दासम्म पाइलट बन्ने सोच बनाए । त्यस्तै, उनले १० कक्षा उत्तीर्ण गरेसँगै इन्जिनियर बन्ने उद्देश्य राखे । तर, फेरि आईएस्सीपश्चात् नेपाली सेनाको सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट बन्ने उद्देश्य राखे । उनी लेफ्टिनेन्ट बनेनन् । बरु शिक्षक भए ।
पार्किन्सस रोगबाट ग्रसित पत्नी सीताको उपचारका लागि गरेका सम्पूर्ण प्रयास असफल भएपछि प्रचण्ड म्याग्दीको तातोपानी कुण्ड पुगे । यतिले पनि नपुगेर उनले विवाहको ५०औं वर्ष गाँठको अवसर पारेर आफ्नै पत्नीसँगै पञ्चेबाजा बजाएर पुनः विवाह गरे ।
कतिपयले सीतको रोग निको हुने विश्वासले उनले सीतासँगै दोस्रोपटक विवाह गरेको बताएका छन् । उनले भने परिवारमा शान्ति छाउने भएकाले सीतासँग पुनः विवाह गरेको बताउँदै आएका छन् ।
विवाह पार्टी एनसेल लाभकर प्रकरणसँग जोडिएका निरजगोविन्द श्रेष्ठको घरमा गरिएको थियो त्यसैले विवाह उत्सव मनाइएको घरसँग जोडिएर उनको आलोचना हुन थालेको छ ।
सशस्त्र विद्रोहको समयमा माओवादीले अन्तरजातीय विवाह र कम खर्चमा गरिने जनवादी विवाह प्रचलनमा ल्याएको थियो । तर, पार्टीको अभ्यास बिर्सेर प्रचण्डले श्रीमतीसँग दोस्रोपटक भड्किलो र कर्मकाण्डी विवाह गरेका छन् । यसलाई प्रचण्डमा देखिएको सांस्कृतिक विचलनका रुपमा लिइएको छ ।
प्रचण्ड आफैं थाके, गले र एमालेमा पार्टी बुझाए र आफू पतन भए
विप्लव ‘कठै प्रचण्ड !’ भन्दै लेख्छन्, ‘सांस्कृतिक दृष्टिकोणको विचलन त झनै डरलाग्दो तरिकाले आयो कि नेताहरुको जीवनशैली राजसी ठाँटमा अगाडि बढ्यो । जनवादी बिहे हुन छोडे, गरेका पनि बिग्रिन थाले, एउटैले तीनवटा बिहे गर्दा नि पार्टीले छुट दियो ।
ती विचलनका कदममा प्रचण्डले रोक्न छोडेर साक्षीजस्तै बसेर यसरी प्रचण्डको पतन हुन पुग्यो । जीवनभर एमालेलाई संशोधनवादी भनेर नथाक्ने प्रचण्ड आफैं थाके, गले र एमालेमा पार्टी बुझाए र आफू पतन भए ।’
सशस्त्र विद्रोहका घाइतेले उपचार नपाएर अनशन बसिरहँदा उनी श्रीमतीको उपचारका लागि सिंगापुर, भारत र अमेरिका पुग्न सक्ने भए । गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुर्याउँछु भन्ने प्रचण्ड आफैं एक सिंहजस्ता भए । उनलाई आलोचना गर्नेहरु भन्छन् ।
प्रचण्डमा देखिएका यस्ता परिवर्तनलाई ‘महापतन’को संज्ञा दिन्छन्, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव । उनी लेख्छन्, ‘यसरी कुनै बेला नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र सशस्त्र विद्रोहका सर्वोच्च कमान्डर र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका उदाउँदो नेता प्रचण्डको महापतन हुन पुग्यो !’
तर, जवाफमा प्रचण्ड भन्ने गर्छन्, ‘बिस्तारै मान्छेले बुझ्दै गएका छन्, प्रचण्ड कस्तो मान्छे रहेछ त ?’
‘बसाइँ हिँड्नेको ताँतीले बस्नेको मन रुवाउँछ, लाखौं लाख उजाड छ यो देश, मुठीभरलाई स्वर्ग छ,’ प्रचण्डलाई औधी मन पर्ने गीत हो यो । प्रचण्डकै भाषामा भन्ने हो भने यही गीत गाउँदै उनले संगठन विस्तार गरेका थिए । जेबी टुहुरेले लेखेको यो गीत प्रचण्ड अहिले पनि गुनगुनाउँछन् होला ।
२०४७ सालमा ललितपुरको कुपण्डोलमा प्रचण्डले पहिलो अन्तर्वार्ता दिए पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीलाई । अन्तर्वार्ता लिएर फर्किएपछि त्रिपाठीले प्रचण्डबारे आफ्ना सम्पादकलाई यसरी सुनाए, ‘भूमिगत कम्युनिस्ट नेता मोहनविक्रम सिंह जुन दिन खुला राजनीतिमा आउनेछन्, त्यसपछि उनी सकिनेछन् । तर, प्रचण्ड खुला राजनीतिमा आए भने उनले देश खानेछन् ।’
तर, खुला राजनीतिमा आएसँगै प्रचण्ड सुविधाभोगी र आत्मकेन्द्रित भएको ठहर गर्दै त्रिपाठी लेख्छन्, ‘खुला राजनीतिमा सहभागी हुन आए पनि सफल हुने ठानिएका प्रचण्ड यति धेरै सत्ताकांक्षी, आत्मकेन्द्रित, सुविधाभोगी, झेली र हिंसात्मक प्रवृत्तिका होलान् भन्ने अनुमानचाहिँ त्यसबेला गरिएको थिएन ।
एउटा व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा देशका निम्ति वरदान साबित भएका दृष्टान्त संसारमा अनेक छन् र व्यक्तिका महत्त्वाकांक्षाका कारण देश बर्बादीका उदाहरण पनि पर्याप्त छन् ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ २, २०७६, ०१:१८:००